Ireo Mpitarik’ady Miteny Amin’ny Vahoaka Libane: Ndeha Isika Hamela Heloka Sy Hanadino! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2016 17:35 GMT
“Fanambàrana ny sarin'ireo Libaney Mpitarik'ady”. Geagea (miaraka amin'ny volombava) ary Geagea Aoun (amin'ny fanamiana), miseho eo amin'ilay sary eny ambony indrindra. Loharano: moulahazat.wordpress.com
Miavaka i Libanona, fantatray izany, satria Phéniciens ireo razanay ary satria sady afaka milomano no migorisa amin'ny ranomandry amin'ny andro iray izahay. Fa mihavaka ihany koa i Libanona satria mbola eo amin'ny fahefana ihany ireo olona malaza an'ny ady an-tranon'i Libanona, mandihindihy eo ambonin'ireo vatana mangatsiakan'ny olon-tsotra maty an'arivony sy ireo Libaney olon-tsotra velona miisa 4,5 tapitrisa. Ny faha 18 Janoary 2016, neken'ilay lehiben'ny Hery Libane Samir Geagea ampahibemaso ny firotsahan'ilay fahavalony tamin'ny ady, Michel Aoun, ho kandidà ho filohampirenena. Midika izany fanekena izany fa mety hahazo filoha vaovao ihany amin'ny farany i Libanona, taorian'ny 20 volana izay naha-tsy nisy mpitàzona ny toerana avo indrindra tao amin'ny firenena.
Izao ny fisehoan-javatra sasantsasany. Geagea, ilay lehiben'ny mpanatanteraka amin'ny Hery Libaney, antoko politika Kristiana faharoa lehibe indrindra ao Libanona, ary Aoun, Kaomandin'ny Tafika Libaney teo aloha sady mpanorina ny Free Patriotic Movement (Hetsika Fitiavan-tanindrazana Malalaka), dia mpifahavalo niady nifanandrina nandritra ny Ady an-trano Libaney (1975-1990). Ny 31 Janoary 1990, nifandona tamin'ny Hery Libane ( milisy iray tamin'izany fotoana) ny Tafika Libaney, teo ambany fitantanan'i Aoun. Nametraka fanamariha tamin'ny fanambaràn'i Aoun moa io Hery Libaney io hoe natao ireny ho an'ny tombotsoan'ny firenena mba “hampiraisan'ny governemanta ireo hery fiadiana”, midika izany hoe tokony ho eken'ny Hery Libaney ny fahefany ho toy ny filoham-panjakana vonjimaika. Nahafaty olon-tsotra an-jatony maro ilay fifandonana.
Tsapako ny filàna ny fanampiako ny anjara birikiko —na ny liras roako —amin'ity raharaham-panjakàna ity noho ny zavatra nolazain'ny Jeneraly Aoun nandritra ny nampitahain‘ilay mpitoraka bilaogy, Joey Ayoub, amin'ny kabary fanekena amin'ny Oscars — hoe te-hamela ny lasa ho momba ny lasa izy mba hanorina ny hoavy.
“I would like to thank the academy for giving me this opportunity to shine” https://t.co/ThGW42dv0h
“Tiako ny hisaotra ny akademia aho ny nanomezany ahy ity fotoana ity hahafahako manjelatra”
Nizara tamin'ny Aterineto ireo tantaran'ny fotoana nidarohan'i Aoun sy Geagea ireo mpiray vodirindrina aminy ny vahoaka. Tsy afaka ny hanamarina izao aho, satria mbola tanora loatra aho tamin'izany fotoana izany ary nanana “vintana” ny ho teraka tany amin'ny tanàna lavitry ny maro tany avaratr'i Libanona. Tsy afaka ny hanamarina voalohany ny alahelo nentin'ny ady aho, ny famoizana, ny tahotra, ny fiainana voahodidin'ny fahafatesana. Fa afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny fankahalàna hitako aho, ary mbola manohy mahita maso izany, eo amin'ireo olona mitovy taona amiko na tanoranora kokoa izay tsy niaina tao anatin'izany ady izany koa. Na inona lazain'ny olona, efa voazarazaran'ny fitsitokotokoana ireo faritra, tanàna ary fiarahamonina aty Libanona, efa voazarazaran'ireo antokon'i Aoun sy i Geagea.
Tsy hoe tsy te-hijery izay niainan'ireo tanora mpikatroka ireo aho, na ny niainan'ireo havan-tiany. Fa manontany tena ihany aho hoe, nahoana izy ireo, izay tsy niaina nivantana tamin'izany ady izany akory, no mahavita manangona lonilony be toy izany, nahoana izy ireo no mihaino ireo hira mikasika ilay ady ratsy izay efa tapitra 25 taona lasa izay, izay milazalaza mpitarika ho sahala amin'ny alpha sy omega, ary ny iray toy ny nalefan'andriamanitra. Valaketraka fotsiny aho mahita ny fomba hianaran'izy ireo maneho ny fanohanany amin'ny fampanenoana anjomara-nà fiara —“taratatata” na “tata tatata tata tata tata” amin'ny toerana na fotoana tsy tokony hanaovana izany, izay mety hahasorena anao — mametraka takelaka taratasy amin'ny fiaran-dry zareo, ary manofahofa samirery ny ady nolovainy. Ady tsy misy rà mandriaka, marina izany, fa kosa ady mangatsiaka ihany na izany aza.
“Valaketraka fotsiny aho mahita ny fomba hianaran'izy ireo maneho ny fanohanany amin'ny fampanenoana anjomara-nà fiara —“taratatata” na “tata tatata tata tata tata” amin'ny toerana na fotoana tsy tokony hanaovana izany, izay mety hahasorena anao…”
Aiza no hametrahana fanontaniana amin'ireo arahan-dry zareo an-jambany, sy hanontany fanontaniana toy ny hoe “fa misy inona”? “iza no nandresy”? “Firy ny olona maty”? “Inona no nanjo an'ireo nalaina an-keriny”? “Firy ireo vehivavy sy ankizivavy voaolana”? “Fatin'olona firy no nofatorana sy notaritina tamin'ny fiara toy ny amboara an'ady”? “Mofo firy no nisy nangalatra tamin'ny toerana fanaovana fisavàna”?
Nandritra ny “kabary fanekeny” nilaza ambangovangony i Aoun hoe izay niseho dia niseho, ary tokony avelantsika any aoriantsika izany, ary angamba tokony hotsaroantsika izany mba tsy ho averintsika indray. Nihomehy i Geagea teo anilany.
Na hadisoantsika aza izany (isika koa no te-hifidy azy ireo hatrany hatrany, manome alàlana antsika hanao fifidianana ireny fotoana ireny), tsy te-hitsahatra ny hino aho hoe mendrika ny tsaratsara kokoa isika. Ity fanekena ity, ity fifanarahana eo amin'ireo roa mpano heloka bevava an'ady ity, dia mbola maneho fàntsika iray hafa amin'ny vatapatin'ny fahatsiarovana faobe antsika miaraka ihany. Ankehitriny, isika izay tsy niaina izany ady izany samy tsy afaka ny hitàzona ireo lehilahy ireo ho tomponandraikitra tamin'ny fahafatesan'ireo olona an'arivony maro. Ary ankehitriny, milaza amintsika izy ireo ny mba hanadino sy handroso. Satria ve metimety amin'izy ireo izany? Satria taorian'ireo taona maro saika hifandevonan'izy ireo, io no hany làlana tokana hijanonana ho velona? Tsy tokony hametraka fanontaniana momba ny lasan'izy ireo na hitaky ny rariny isika, ary tian'ireo lehilahy ireo hahatoky azy ireo fotsiny ve isika amin'ny hoavintsika?
Mikasika ny fametrahana fandriampahalemana, hoy izy ireo. Fa afaka tena hisy ao anatinà zavatra poakaty tokoa ve ny fahalemana? Ahoana no ahatongavantsika amin'ny fahalemana raha tsy midy dingana fampihavanana? Raha tsy misy fitsaboana ny ratra navalan'ny lasa? Ahoana no mety hisian'ny fahalemana raha toa ka ahofahofa isan'andro ny ady mangina, mahery setra, mangatsiaka?
Aiza marina moa no toerana ho an'ny fahalemana raha toa ka izay jerena rehetra dia kolikoly avokoa, tsy fandraisana andraikitra, fitiavantena sy havana, halatra, ary tsy firaharahiana ireo vahoaka manontolo?